Maninona no mampiasa kambana nomerika amin'ny fananganana - Geofumadas
Nahoana no ampiasaina ny marika nomerika amin'ny fanorenana
March, 2019 Engineering, fanavaozana
Ny zava-drehetra manodidina antsika dia lasa nomerika. Advanced teknolojia toy ny solon-tsaina sy ny Internet-javatra (IoT) Lasa miha manan-danja faritra orinasa tsirairay, ka dingana haingana sy mahomby kokoa eo amin'ny lafiny vola, ny fotoana sy ny traceability. Mandeha dizitaly dia mamela ny indostria tsirairay hanatratra bebe kokoa amin'ny minitra; , fara fahakeliny, izany dia manondro Optimization mitady ny fandrosoana farany eo amin'ny computing hery sy ny manan-tsaina algorithms, miaraka amin'ny teknolojia fivoaran'ny toe-draharaha any Sela Mpandray Hafanana, miniaturization, Namorona ny Robots sy ny drôna, izy ireo manampy dia ny fanorenana orinasa mba hahatakatra ny fomba ahafahany mitambatra ny tontolo dizitaly sy ara-batana mba hananganana trano mora kokoa, maivana sy azo antoka kokoa amin'ny fotoana tsy dia ilaina.
Ohatra iray amin'izany ny fomba hamelan'ny drôna ny fakana sary marobe ao anatin'ny fotoana fohy, hanamorana ny lahasa asa. Saingy tsy izany ihany, satria miankina amin'ny sensor misy ny drôna, ny data dia mety ho azo miaraka amin'izay fotoana izay anaovana modely toetra ara-batana izay manome lanja fanampiny ho an'ny photogrammetry tsiranoka tsotra. Ity foto-kevitra izay tena manova ny endrika indostrian'ny AEC ity dia ny "Digital Twins" ary ohatra vao haingana momba ny zava-misy nampitomboina avy amin'ny porofo Hololens2 fa hanana ny ankabeazan'izany isika mihoatra ny indostrian'ny fialamboly.
Araka ny tatitra nataon'ny Gartner vao haingana, dia manakaiky ny "Peak of the expectation" ny fironana "Digital Twin". Inona koa? Ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 10 taona dia andrasana amin'ny "Product Plateau" ny fironana.
Hetsiky ny hype Gartner ho an'ny teknolojia vaovao 2018
Inona no atao hoe kambana dizitaly?
Ny jiro dizitaly dia manondro ny modely virtoaly ny dingana, vokatra na serivisy. Ny kambana dizitaly dia fifandraisana misy eo amin'ny tontolon'ny zava-misy iray manontolo sy ny endriny nomerika izay mampiasa tahirim-pandinihana maharitra. Ny angon-drakitra rehetra dia avy amin'ny mpamantatra hita ao anaty zavatra ara-batana. Ny fampisehoana nomerika dia ampiasaina amin'ny fampisehoana, ny famolavolana, ny fanadihadiana, ny simulation ary ny drafitra fanampiny.
Tsy toy ny maodely BIM, ny kambana nomerika dia tsy voatery hanompo zavatra misy solontena spatial. Ohatra, ny fizotry ny fifanakalozana, ny fisie tsirairay, na ny fifandraisana misy eo amin'ireo mpandray anjara sy ny vondrona fitantanan-draharaha.
Mazava ho azy, ny kambana nomerika amin'ireo fotodrafitrasa no manintona indrindra, farafaharatsiny eo amin'ny sehatry ny Geo-engineering. Amin'ny alàlan'ny famoronana kambana nomerika an-trano, ny tompona trano sy ny mpandraharaha dia afaka misoroka ireo olana maro izay mitranga ao anatin'ny trano, mandray ny paikadim-pananganana ary manana trano azo antoka kokoa noho izany. Ohatra, azonao atao ny mamorona kambana nomerika amin'ny tranobe iray ary manamarina ny vokatr'izany amin'ny horohoron-tany lehibe. Miankina amin'ny valiny dia azonao atao ny manamboatra ny fanovana ilaina amin'ny tranobe, alohan'ny hitrangan'ny loza ary tsy ho azon'ny tanana intsony ny raharaha. Izany no ahafahan'ny kambana nomerika amin'ny trano mamonjy ain'olona.
Sary natolotry ny: buildingSMARTIn Summit 2019
Ny zana-kisoratra nomerika dia ahafahan'ny mpanamboatra trano hahalalana ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny tranobe misy amin'ny fotoana tena izy, mifandraika amin'ny lahatsoratry ny fiainana izay ahitana ny famolavolana, ny famolavolana, ny fanorenana, ny fikojakojana sy ny fampiasana ny harena. Izy io dia manome fidirana haingana ny fampahalalana rehetra momba ny tranobe fananganana. Manampy ireo mpanorina izy ireo mba hahatoky hatrany na dia ny zavatra faran'izay kely aza, toy ny fepetra ilaina amin'ny ando iray.
Tahaka ny niarahan'i Mark Enzer, CTO, MottMacDonald tato ho ato amin'ny tranon'ny SMARTIn Summit 2019, niresaka momba ny fanavaozana fanavaozana ny kambana nomerika; "Tsy hitranga amin'ny fotoana tena izy io, fa amin'ny fotoana mety."
Ny tombony amin'ny fampiasana kambana digitale amin'ny fanorenana.
Ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny teknôlôjia dia mahatonga ny fitsaboana ho mahomby. Ohatra, ny kambana dizitaly, amin'ny famelana ny simulations mba hananana ny fahafahana mitondra ny fahasimbana vokatry ny loza voajanahary voajanahary sy nataon'olombelona. Afaka manampy ny olom-pirenena hitondra fiainana matotra izy ireo. Ohatra, amin'ny tranga fampiasam-bola izay tokony heverina fa be dia be, amin'ny alalan'ny fampiasana rindrambaiko simulation mpandeha an-tongotra, dia afaka maminavina hoe rahoviana sy aiza no hisy fihenan-dàlana bebe kokoa. Amin'ny fampidirana ireo fiovana ilaina amin'ny modely nomerika amin'ny fotodrafitrasa, dia azo atao ny manatontosa fandriampahalemana bebe kokoa, ny fahombiazany ary ny fandaniana amin'ny fitrandrahana amin'ny fanorenana sy ny fikojakojana ny harena.
Ny tombony azo amin'ny fampiasana kambana digitale amin'ny fanamboarana dia maro. Ny sasany amin'izy ireo dia etsy ambany:
Fanaraha-maso tsy tapaka ny fivoaran'ny fanorenana.
Ny fanaraha-maso eo amin'ny sehatry ny tranokala fananganana amin'ny alalan'ny dizitaly dizitaly dia manamarina fa mifanaraka amin'ny drafitra sy ny fepetra ny asa vita. Amin'ny zana-kimera dizitaly, azo atao ny manara-maso ny fiovan'ny modely arakaraka ny fanorenana azy, isan'andro sy isan'ora, ary raha misy ny fiviliana dia azo atao ny manao fihetsika maika. Ankoatr'izay, ny toetry ny vatolampy, ny tadiny ao amin'ny tsanganana, na ny famindrana zavatra ao amin'ny tranobe fanorenana dia mora azo ahitsy amin'ny rojo dizitaly. Ny fikarohana toy izany dia mitarika fanaraha-maso fanampiny ary ny olana dia voamarina haingana kokoa, izay mitondra vahaolana mahomby kokoa.
Ny fampiasana tsara ny harena.
Ireo zana-kimera nomerika dia mitarika amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola tsara kokoa ary manampy ireo orinasa mba tsy handany fotoana mahomby amin'ny hetsika sy ny fanodinana fitaovana tsy ilaina. Amin'ny fampiasana an'io teknolojia io dia azo alaina ny famatsiam-bola tafahoatra ary mora kokoa ny maminavina ny fepetra takian'ny sehatra ao amin'ny tranokala.
Na dia azo ampiasaina aza ny fampiasana fitaovana ary afaka alefa amin'ny asa hafa ny tsy azo ampiasaina. Izany dia mamonjy ny fotoana sy ny vola.
Ny fiarovana dia fiahiahiana be eo amin'ny toeram-panorenana. Mpirahalahy digitale, amin'ny fanomezana alalana ny orinasa hanaraka ny olona sy ny toerana mampidi-doza eo amin'ny toeram-panorenana iray, hanampy amin'ny fampiasana fitaovana sy fiasa tsy azo antoka ao amin'ny faritra mampidi-doza. Miorina amin'ny fampahalalana amin'ny fotoana mety, dia azo atao ny mamolavola rafitra fampandrenesana mialoha mba hahafahan'ny mpitantana fanorenana fantarina rehefa misy mpiasa iray any amin'ny faritra tsy azo antoka. Azo atao ihany koa ny mandefa fampandrenesana amin'ny fitaovana portable ho an'ny mpiasa mba hisorohana ny loza mety hitranga.
Ny tombony azo amin'ny fampiasana teknolojia dizitaly amin'ny fanamboarana dia maro. Ny fahazarana taloha dia sarotra, fa mba hahomby kokoa amin'ny asa fanorenana, ilaina ny mandeha digital. Ny fampiasana teknolojia dizitaly dia afaka mitondra fanavaozana goavana ho an'ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa ary hitondra ny kalitao sy ny fahaiza-manao amin'ny heva vaovao. Ny orinasa dia tsy maintsy miomana sy mampifanaraka amin'ny tontolo miovaova dizitaly!
Nanana fotoana nitafatafa tamin'ireo mpiara-miasa Breziliana izahay tamin'ny taon-dasa, tany Londres. Amin'ny alàlan'ny fampiasana kambana nomerika, ny Seranam-piaramanidina Governador José Richa (SBLO) ao Brezila, ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra fahefatra any atsimon'i Brezila dia afaka mitantana tsara kokoa ny angon-drakitra seranam-piaramanidina sy hahomby amin'ny asany.
Mahatsapa fa ilaina ny tsara kokoa handamina ny angon-drakitra ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina mpandraharaha SBLO, Infraero nanapa-kevitra ny hanangana ny nomerika kambana izay miasa ho toy ny harato ny zava-misy sy ny foibe repository ho an'ny angon-drakitra rehetra seranam-piaramanidina, anisan'izany ny foto-drafitrasa, trano, trano rafitra , ireo fitaovana sy sarintany ary ireo angona fitantanana.
Ny BIM sy GIS miaraka amin'ny fangatahana Bentley dia nampiasaina mba hamolavolana ireo orinasa 20 efa misy, izay mandrakotra mihoatra ny metimety XmUMX metatra amin'ny seranam-piaramanidina. Izy ireo koa dia nanamboatra lalan-dàlana sy fiarandalamby, fiaramanidina fiaramanidina roa sy rafitra fiara ary lalana fidirana. Ny ekipan'ny tetikasa dia namorona tahiry manokana ho fanohanana ny planina sy hanatsarana ny fitantanana ny tetikasa.
Ny ekipan'ny tetikasa dia namorona kambana dizitaly tao amin'ny seranam-piaramanidina izay ahitana efijery misy seranam-piaramanidina ary toeram-pivarotana foibe ho an'ny angona avy amin'ny seranana rehetra Ny tranokala afovoan-toerana dia manampy ireo mpampiasa mba hamantatra tsara ny toerana misy ny rafitra ao amin'ny fotodrafitrasan'ny seranam-piaramanidina, ny fanatsarana ny fitantanana ny orinasa amin'ny asa azo antoka sy mahomby. Ny roa-jiro dizitaly dia hanatsara ny tetikasa momba ny fotodrafitrasa any amin'ny seranam-piaramanidina any an-toerana, ary koa ny drafitra sy ny fitantanana. Miaraka amin'ny fanampian'ny dizitaly dizitaly, Infraero dia afaka mampihena ny fikarakarana ny fikojakojana sy ny fanatontosana ny seranam-piaramanidina tsara kokoa amin'ny SBLO. Ny ekipan'ny tetikasa dia manantena ny hamonjy mihoatra ny BRL 559,000 isan-taona miaraka amin'ny kibony digitale. Ny fikambanana ihany koa dia manantena ny hahita ny fitomboan'ny fahamendrehany.
ProjectWise dia nampiasaina mba hamoronana sehatra fifindran'ny seranam-piaramanidina, izay nampiasaina ho tontolo manodidina ny tetikasa. Ny fahafaha-manafatra ny mari-pahaizan'ny MicroStation dia namela ny ekipa hamorona ny efitranon'ny seranam-piaramanidina rehetra mampiasa ny rahona. OpenBuildings Designer (taloha AECOsim Building Designer) nanampy famolavolana sy ny trano famakiam-boky handamina fitaovana sy seranam-piaramanidina mba hanahafana ny mpandeha alalan'ny terminal, entana alalan'ny terminal, afo toerana sy ny trano efa misy. Ny ekipa tetikasa OpenRoads ampiasaina mba hamoronana ny voafaritra faritra sy ny rafitra Map hazakazaka sy ny fipetrahana runways, taxiways sy ny fanompoana lalana.
Previous Post«Previous Oracle dia mpanohana mpiara-miasa amin'ny World Geospatial Forum 2019
Next Post #GeospatialByDefault - Forum Geospatial 2019manaraka »